WrestleMania 37 status Brock Lesnar dia nambara - Tatitra - Wwe
WrestleMania 37 status Brock Lesnar dia nambara - Tatitra
Ny alina voalohany an'ny WrestleMania 37 dia iray andro monja sisa. Amin'ity hetsika ity dia honohono maro no niely momba ny fiverenana tampoka. Ohatra, nanontany tena ny WWE Universe raha hiseho amin'ilay fampisehoana i Brock Lesnar.
Mpankafy WWE marobe no nanantena an'i Brock Lesnar hiverina ao amin'ny orinasa ara-potoana ho an'ny WrestleMania 37. Fa ny fisehoany farany dia tany WrestleMania 36, ​​izay naharesy an'i Drew McIntyre tamin'ny hetsika lehibe. Fantatra nanomboka tamin'izay fa hatramin'ny 31 aogositra 2020, i Lesnar dia masoivoho afaka, ka ny hoaviny dia hita eny amin'ny habakabaka.
Mety hitohy ny tsy fahatongavan'i Lesnar. Araka ny Miady , tsy mbola nisy ny drafitra hanasongadinana an'i Brock Lesnar ao amin'ny WrestleMania 37. Ny tatitra nataon'izy ireo dia nilaza fa hatramin'ny volana febroary dia tsy tafiditra tao anaty drafitra WWE i Lesnar.
Amin'ity taona ity @WWE @WrestleMania dia hipoitra avy amin'ny #SuplexCity .
Ny ben'ny tananao amin'ny alina? @BrockLesnar !
Hoy izany #NyHumbleAdvocateo (I, #PaulHeyman ), ary manome toky anao aho fa zava-misy izany izay ho tsapan'ny @DMcIntyreWWE ! #WrestleMania # WrestleMania36
- Paul Heyman (@HeymanHustle) 4 aprily 2020
Talohan'izay dia kintana natanjaka indrindra tamin'ny WWE i Lesnar. Ny tompon-daka WWE Universal Champion intelo dia efa nampiavaka ny seho hetsika lehibe indrindra, saingy ny WWE kosa dia namindra ny fifantohany amin'ireo mpifaninana hafa tato anatin'ny volana vitsivitsy.
Resin'i Brock Lesnar tamin'ny lalao WrestleMania roa nataony
Seth Rollins amin'ny WWE
Ny fisehoana farany WWE an'i Brock Lesnar dia tany WrestleMania 36. Tamin'ny hetsika lehibe dia resiny ny Tompondakan'i WWE tamin'i Drew McIntyre. Tsy naharitra dimy minitra akory ny lalao.
Tamin'ny fananganana WrestleMania 36 dia nifaninana tamin'ny lalao Royal Rumble i Lesnar, na dia nitana ny anaram-boninahitra tamin'izany aza izy. Taorian'ny nanesorany lehilahy marobe dia nesorin'ny mpandresy farany izy, McIntyre. Ilay mpiady Scottish dia nifidy ny hanao fanamby taminy tao amin'ny WrestleMania 36.
#TBT hatramin'ny 2002 ... Mpisolovava amin'ny fitondrana tsy miady hevitra @WWE Tompondaka mavesatra mavesatra an'izao tontolo izao @BrockLesnar . 18 taona aty aoriana, mbola eo an-tampony isika. Mbola mitazona ny volamena. Ary mbola nitodi-doha tamin'ny hetsika lehibe an'ny @WrestleMania ! pic.twitter.com/QGDX7uJXpT
- Paul Heyman (@HeymanHustle) 2 aprily 2020
Toy izany koa, tao amin'ny WrestleMania 35, resin'ny The Beast ny Tompondakan'ny Tompon-daka Iraisam-pirenena WWE tamin'ny mpandresy Royal Rumble Men. Tamin'ny lalao fanokafana ny hetsika 2019 dia resin'i Seth Rollins i Lesnar mba hahazoany ny volamena.
Diso fanantenana ve ianao naheno momba ny tsy fahatongavan'i Lesnar ao amin'ny WrestleMania 37? Alefaso ireo hevitra etsy ambany.
ny fomba hanampiana olona amin'ny fisarahana
ny fomba tsy itiavan'ny olona tsy tia anao
lisitry ny zavatra tokony hatao rehefa misy noloahany
ny fomba hitondrana am-panajana ny hafa
rehefa tsy manam-potoana ho anao ny sipanao